Floating ရေကူးကန် - တရုတ် Gormeet ပလတ်စတစ်
က ISO 9000: 2008 လက်မှတ်ရစက်ရုံ
Dutou စက်မှုဇုံ, တောင်ခရိုင်, Zhongshan စီးတီး, Guangdon
facility & ပစ္စည်း
မှို Procucts မှုတ်
ထိုးနှက်တန်ဆာ Tool ကိုအမှုပေါင်း
တန်ဆာ Panel များမှုတ်, ဇယား
ထိုင်ခုံ & များရှိ
modular Floating Cube
ပူပြင်းနွေရာသီမှာတော့လူနေအိမ် Floating ရေကူးပလက်ဖောင်း, သင့်အိမ်၏ထောင့်ပတ်လည်မှာသေးငယ်တဲ့မြစ်သို့မဟုတ်ရေကူးဘို့တစ်အိုင်ဝတ်စုံကိုလည်းမရှိ, သင်လိုအပ်သမျှတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အအေးနွေရာသီမှတ်ဉာဏ်ကိုဖန်တီးရန်တစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ရေပေါ်ရေကူးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းနား -No ဖုန်နှင့်ကျောက်တုံးများရေကူး, ရေငုပ်ပြီးရေပေါ်ရေကူးပြေးရန် -Custom အရွယ်အစားကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် floating ရေကူးကန် sunbathing များအတွက်ပုဂ္ဂလိကရေကူးပလက်ဖောင်း -Have -Removable -Environment ဖော်ရွေသောရေကို၏ဗဟိုရောက်ရှိဖို့ -Could ...
ပုံသွင်းပြင်ပ Options ကို
အရောင်များ၏ 1. သက်တံ့ရောင်
ပုံသွင်းထားနှင့်အတူ 2. မိမိစိတ်ကြိုက် Logo ပြား
5. stack Feature ကို
လူနေအိမ် Floating ရေကူးပလက်ဖောင်း
ကမ်းနား -No ဖုန်နှင့်ကျောက်တုံးများ
ရေကူး, ရေငုပ်ခြင်းနှင့် sunbathing များအတွက်ပုဂ္ဂလိကရေကူးပလက်ဖောင်း -Have
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် floating ရေကူးကန်
ပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်တစ်ဦးရေပေါ်ရေကူးကန်ကို run ဖို့ကျိန်းသေလတ်ဆတ်တဲ့ရေထုနှင့်လေထုနှင့်အတူခရီးသွားဧည့်ပိုမိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ Gormeet floating ရေကူးကန်အတွက် running ရေထဲမှာနေတဲ့ရေကူးကန်တည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပလက်ဖောင်း floating modular floating Cube
ရေကန်မြို့ရိုးအဖြစ်မှသံမဏိ / လူမီနီယမ်ဘောင်
modular floating Cube တစ်ခုအောက်ခြေမှာဖူး
သံလမ်း, ကမ်းခြေကုလားထိုင်, လှေကား, Parasol: ကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများ
ပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင် -Fresh ရေနှင့်လေထု
-No-စလစ်ပုံသွင်း texture, ထုံးစံအရောင်များနှင့်အရွယ်အစား
- ချေးခံနိုင်ရည်သံမဏိသို့မဟုတ် All-လူမီနီယံဘောင်
-Safe နှင့်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်တစ်ခုအစစ်အမှန်ရေကူးကန်အဖြစ်တည်ဆောက်ရန်, အောက်ခြေအကြမ်းခံ modular Cube ၏ဖန်ဆင်းထားသည်
-More ကြာရှည်ခံမှုနှင့်တည်ငြိမ်ရေး, လျော့နည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
သငျသညျတညျငွိမျ, အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစီးပွားဖြစ် floating ရေကူးကန်ရှာနေခဲ့လျှင်
Ltd. , Gormeet ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ Co. ,
Dutou စက်မှုဇုံ, တောင်ခရိုင်, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်။
© Copyright - 2018: အားလုံးအခွင့်အရေး။